မီးပြတိုက်: ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခြင်း
ဒဿနသမား တစ်ယောက်ပါ။ တွေးခေါ်ရတာ၊ စဉ်းစားရတာကို သဘောကျတယ်။ စာဖတ်ရတာကို ၀ါသနာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊ မှတ်သားလောက်စရာစကားတွေ၊ ဒဿနတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးတွေရဲ့ အတ္ထုပ္ပတိတွေ၊ သမိုင်းတွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ စာဖတ်ပြီးစဉ်းစားတယ်။ အရမ်းကြိုက်ရင် ကူးထားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ကူးပေါက်ရင် ကိုယ်ပိုင် ဒဿနတွေရေးတယ်။ ကိုယ့်အတွေးတွေ၊ ကိုယ့်အမြင်တွေရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်ရေး မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ကျွန်တော့်ဒဿနတွေ ပါလာတတ်တယ်။ အခု နောက်ပိုင်းတော့ မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဘလော့တွေကိုတော့ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ဘလော့တွေ စပေါ်လာကတည်းကပေါ့။ တော်တော်များများကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ရေးဖို့ကို စိတ်ဝင်စားလာတာပါ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့ ဘလော့ရဲ့ ထမဆုံးပိုစ့်ကို တင်လိုက်တာပါ။ ဆက်လက်ကြိုးစားသွား မှာပါ။
ရတ်မန် says 23 November 2007 at 18:13
MELODYMAUNG says 22 December 2007 at 13:19
နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊ မှတ်သားလောက်စရာစကားတွေ၊ ဒသနတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးတွေရဲ့ အတ္ထုပ္ပတိတွေ၊ သမိုင်းတွေကိုဝေမျှပေးလို့ ဖတ်ရမှာလဲ ကြိုက်တယ် တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ကူးပေါက်လို့ကိုယ်ပိုင် ဒသနတွေရေးတာ ကိုယ့်အတွေးတွေ၊ ကိုယ့်အမြင်တွေရေးမှာကိုလဲ ဖတ်ချင်ပါတယ် Cheers! keep it up your this blog, my bro.
ရွှေစကားဝိုင်း says 8 March 2011 at 20:32
ကျနော်အီးမေးပို့တာ ၂ ခါရှိပါပြီ
ကျနော့်ကို ကူညီလိုက်တဲ့အတွက် အကျိုးမယုတ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်။
မီပြတိုက်ဘလောက်ကို အားကျသူတယောက်ကို အားပျက်စေတာတော့ မကောင်းပါဘူး။